Onitra noho ny ratra ara-Maoraly ny Lalàn ny Firenena Vahiny - Mpisolovava avy amin'ny firenena Arabo. Arabo mpisolovava an-tserasera.
Onitra noho ny ratra ara-Maoraly ny Lalàn ny Firenena Vahiny
Ny tanjon ity lahatsoratra ity dia ny fampiharihariana ny hevitry ny tena fomba sy ny fampiharana ny lalàna ka nitarika ireo firenena tahaka an'i Angletera, ETAZONIA, Frantsa sy Alemana tao amin'ny sehatry ny onitra noho ny ratra ara-maoralyNy lalàna vahiny ny firenena dia manaiky izany karazana loza, araka ny ratra ara-maoraly sy ny onitra, indrindra indrindra ao amin'ny takelaka lafy ratsiny. Ny zava-nitranga ny firenena izay heverina, nanangona ny manan-karena manao ny fampiasana ny ara-dalàna io andrim-panjakana. Any Alemaina, ny fanonerana ny fahavoazana ara-pitondrantena no nifehy ny fenitra alemana an-trano Fehezan-dalàna (par.), izay isika dia miresaka momba ny 'fitondran' ny fahavoazana sy ny onitra ara-bola noho ny fahavoazana toy izany. Ao amin'ny fotopampianarana sy pitsarana ampiasaina ny teny hoe 'onitra noho ny mijaly' (na ny ratsy naratra ny fihetseham-po'). Mivantana ny fenitra alemana an-trano Fehezan-dalàna envisage mety izany onitra ao amin'ny toe-javatra ara-batana manimba, infliction hafa hanisy ratsy ny fahasalamana, ny tsy ara-dalàna fetra ny niharam-boina ny fahalalahana. Eo ambany ny fijaliana tokony hahatakatra ny ara-batana sy ny vokatry ny fo mijaly (mandalo), ary eo ambany ny tsy fananana ratsy - mihena ny tsy fananana ny zo sy ny hafa nonmaterial soatoavina izay isan ny toetrany. Fitsarana fanao, ny fototra ny lalàm-panorenana manamboatra ny zon'ny ny toetra sy ny tsimatimanota, dia tapa-kevitra hafa karazana fandikan-dalàna izay no fototry ny firongatry ny lafy ratsiny ho onitra ny fitondran-tena ratsy: fandikana ny tsiambaratelo ny serasera sy firaketana an-tsoratra ny tsiambaratelo natiora, an-tsehatra eo amin'ny fiainana manokana ny olona iray noho ny tsy nahazoan-dalana ny fakàna, ny famoahana tahirin-kevitra mikasika ny fiainana manokana sy ny hafa. Ny frantsay an-trano fehezan-dalàna mirakitra lahatsoratra iray (Art.) izay mivantana manome fiarovana ny an'ny tena manokana sy ny tsy fananana zo. Na izany aza na dia talohan ny teny fampidirana, ny fitsarana fanao ampiharina toy izany fomba fiarovana amin'ny maha onitra ny fitondran-tena ratsy, ny fototry ny fitsipika ankapobeny momba ny takelaka lafy ratsiny (Art.). Izany no manazava ny ny zava-misy fa ny teny hoe 'ratsy' dia voalaza ao amin'ny lalàna araka ny jeneraly sokajy, sy ny fahasamihafana eo amin'ny fananana na ny tsy fananana voka-dratsy toy ny fototry ny andraikitra dia tsy tokony ho entina avy no ho foto-kevitra ny onitra misy fahasimbana. Ny fomba ankapobeny dia ampiharina amin'ny lafy ratsiny ny fanonerana ny fananana sy ny tsy fananana ratsy eo amin'ny toe-javatra sasany, ny fanapahan-kevitry ny fitsarana momba ny filazana ny onitra noho ny fahasimban'ny na dia tsy manondro izay ampahany amin'ny vola vola no nahazo mba hanomezana vola ny fananana sy izay - mba hanonerana ny ratra ara-maoraly. Ao ny ambany Angletera sy ETAZONIA dia misy maro ny fijerena ny tapa-kevitra ny fomba fihevitra iray izay mitovy ny hevitra ny ara-moraly ny fahavoazana: ratra ara-tsaina, aretin-tsaina ratra, natahotra ny fahatairana, ny olon-tsotra chock. Ny fahita indrindra ao amin'ny lalàna ny Angletera sy ETAZONIA, ary tokotokony ho iray hevitra ny fitondran-tena ratsy dia ny teny hoe 'ara-tsaina ratsy'. Ny Anglo-Amerikana tsara voalohany indrindra manavaka ny tanjon ny onitra ara-tsaina ratsy: compensatory - amin'ny tranga tsotra tsirambina ny mahatonga ary tsara - raha ny fanahy iniana na marokoroko tsirambina nahatonga izao ratsy. Amin'ny tranga voalohany, maditra dia tompon'andraikitra ihany no ho ara-batana, ny fahoriana izay vokatry ny fijaliana ara-tsaina, ary ao amin'ny faharoa - toy ny na inona na inona mamantatra ny hoavy (ara-tsaina) fijaliana, ary ara-batana. Ny teny vao misondrotra ny lafy ratsiny ny fanonerana ny tsy fananana (ara-pitondrantena, ara-tsaina) simba any amin'ny firenena rehetra dia iombonana, izay saika mitovy ireo, izay nametraka ny fanonerana ny simba fananana. Toy ny lafy ratsiny hitsangana amin'ny tort lalàna fifandraisana, ary maha-afa-tsy, afaka mitsangana ao amin'ny fifanarahana. Matetika izy ireo dia ampiharina amin'ny raharaha iniana ratra sy ireo karazana nanaovana fifandraisana izay misy ny fanitsakitsahana ny fifanekena nataon'ny natiora, dia tena mety hiteraka ihany koa ny fatiantoka ara-tsaina, ka rehefa toy izany ny vokatry ny fifanarahana tapaka toy ny fisian'ny ratra ara-maoraly, dia efa fantatra mialoha. Ny olana ny habetsaky ny andraikitra noho ny fahavoazana toy izany dia tena sarotra ny andro. Na inona na inona firenena misy tsy tokana ny lalàna mahazatra, na namorona ny fampiharana ny fitsarana, ny fomba fiasa noho ny famaritana ny fe-immaterial (ara-tsaina) fahavoazana sy ny habetsahan'ny ampy onitra. NETSCH) onitra noho ny fijaliana tokony ho ara-drariny, tafiditra ao ny foto-kevitra ankapobeny ny equalization ny tombontsoa azo avy amin'ny ny niharam-boina dia tsy maintsy havaozina ny fanjakana izay nisy talohan ny fanitsakitsahana ny zo na ny tombontsoa, fa tsy tokony hahazo ny tombontsoa vokatry ny onitra ho azy toy izany ny ratsy.
Ao amin'ny dingan'ny fametrahana ny haben'ny onitra ara-drariny, ny ara-pitsarana ny fomba fanao maka an-kaonty, toy izany tondro: ara-batana fijalian'ireo niharam-boina (manokana ny tsy fahazakana ny fanaintainana, karazana ratra ara-batana, ny faharetan'ny fitsaboana sy ny vokatry), ara-tsaina fijaliana (vokany, ny fanolanana ny endrika, taona, mety ny fanohizana ny asa teo aloha, ny fahatsiarovan-tenan'ireo ny olana ny iray ny toerana, ny rotaka noho ny hanjo ny fianakaviana, ny mety fiarovana ny ny tsirairay ny toetra ny tsirairay (talenta, fironana), manokana, ara-tsaina, osa, fahazaran-dratsy traikefany), ny mari-pahaizana ny fahadisoan'ny causer ny ratsy, ny fananana toerana, sns.
Amin'ny fikajiana ny vola onitra noho ny fitondran-tena ratsy, ny vola ny onitra teo aloha natao ny fitsarana eo amin'ny toe-javatra tahaka izany ihany koa naka an-kaonty. Ao Frantsa, izay ny lalàna sy ara-pitsarana manao tsy voafetra manokana, tsy ny fananana ny zo sy ny immaterial soatoavina misy manokana lisitra sy hamela ny onitra noho ny ratra ara-maoraly amin'ny tsy voafetra ny toe-javatra, ny fitsarana mifanaraka tsara ny filazana ho an'ny onitra noho ny fitondran-tena ratsy, tarihin'ny ny fitakiana ny rariny. Izany dia midika fa ny mpitsara dia tsy manondro ny rafitrisa kajikajy sy ny fiheverana rehetra ny matoatoa va ny fifandraisana izay tena sarotra ny lanjany, izany fanapahan-kevitra rehetra dia tsy maintsy ho tsy ara-drariny. Hiankina ihany koa ny fifandraisana misy eo amin'ny tsirairay sy ny toe-javatra ny ratra ara-maoraly ary onitra izay mety tsy mivantana hanamaivanana ny toe-javatra nisy ny niharam-boina.
Ny commonality ny ara-dalàna ny rafitra Angletera sy i Etazonia no mahatonga fitoviana eo amin'ny manakaiky ny vahaolana ny olana ny habetsaky ny onitra ho an'ny voka-dratsy ara-tsaina. Ara-pitsarana manao fitiliana fomba isan-karazany mba hamahana ity olana ity Ao ny sasany ny fitsarana ny fanapahan-kevitra, tsy maharitra, fomba efa ampiharina, izay mihevitra fa ny acuteness ny fomba fijery ny korontana sy ny fanaintainana mahazo manalefaka ny fotoana.
Ny fototry ny fomba hafa dia hoe ny 'cost' ny fijaliana tokony ho fanombanana ny fampiasana 'tsena' mason-tsivana: ohatra, dia ilaina mba hahitana hoe inona ny vola ny olona iray dia hanaiky an-tsitrapo ho velona ny fandidiana ny fanaintainana, sy ny mba hanome izany vola toy ny onitra.
Fomba iray hafa dia mifototra amin'ny fanombanana ny ho very ny fanantenana ny fiainana: dia ny kajy ohatrinona eo ho eo ny androm-piainan'ny olona niharam-boina dia mety mihena mifandray amin'ny ara-pahasalamana vokatry ny azy raha oharina amin'ny eo ho eo ny androm-piainan'ny olona ao amin'ny firenena.
Ity fomba ity dia tsy ampiasaina amin'ny toe-javatra ny ratra ny zanany noho ny fiainana toerana no tsy niasa avy mbola. Ao ny ara-dalàna ny literatiora, marika avy telo ny jeneraly teorika ny fomba ny vahaolana amin'ny fanontaniana ny habetsaky ny onitra noho ny ara-tsaina voka-dratsy izay efa lasa any Anglo-Amerikana ara-pitsarana fanao - pisainana, ny tena manokana sy ny asany. Ny toetra fototry ny pisainana fomba fiasa dia ny hitarika ny fanoharana ny simba fananana: ny fiainan'ny olona iray dia heverina ho ihany koa ny fananana ny Fiasan'ny ny vatana - ny soatoavina toy ny, ohatra, ny trano, mizara, sns. Noho izany, ny faritra rehetra amin'ny vatana dia manana tanjona zava-dehibe, ary raha izany dia very na simba, dia tsy maintsy ho soloina (miaraka amin'ny vola, izay mifanaraka amin'ny soatoavina izay mety ho azony amin'ny alalan'ny azy ireo). Fomba fanao mampihatra ny antsoina hoe 'tariff rafitra', araka izay habetsaky ny onitra dia miankina amin'ny ny hamafin'ny ratra.
Toy izany, ohatra, ny fahaverezan ny maso dia tombanana ho pound sterling, ny fanondroana ny ny rantsan-tànany ao amin'ny -pound sterling, ny ratra ny valanoranony amin'ny -pound sterling, sns.
Tany Angletera, dia misy ny antsoina hoe tariff momba ny onitra, izay ampiharina amin'ny Vaomiera momba ny onitra ho an'ny voka-dratsy nateraky ny heloka bevava, hatramin'ny taona. Ity rafitra compensates ho ara-batana na ara-tsaina ratsy mifandray amin'ny heloka bevava herisetra, izay nitarika ho amin'ny filatsahan'ny amin'ny fiainana asa atao: ny fihenan'ny amin'ny fahaiza-miasa, mianatra ny fahafahana, ny severance ny fifandraisana ara-tsosialy, ara-tsaina aretina sy ny hafa (anisan'izany ny biolojika) manimba ny vatan'ny olombelona fa voafetra ny taova ao amin'ny asa mifandraika amin'ny fiainana ara-tsosialy. Karazana rehetra ny fahavoazana dia rava ho tariff rafitra ho dimy amby roa-polo ny karazam-biby iray onitra vola ao amin'ny vondrona tsirairay. Ny kely indrindra ny onitra ny zava-faharetan'ny ara-tsaina (ara-pihetseham-po) ny korontana sy ny aretina avy amin'ny enina ka hatramin'ny enina ambin'ny folo herinandro no iray amin'ny arivo livres sterling. Ny olona specificities ny tranga tsirairay ao ny raharaha ny fampiharana izany tetika, tsy misy dikany. Ny fomba manokana dia ny lalina ny traikefa vokatry ny fahavoazana ara-pahasalamana dia miankina amin'ny toetra ny psyche ny niharam-boina. Noho izany, ny tanjon ny onitra dia mba hameno amin'ny fomba sasany ny fahaverezan'ny fahafahana hankafy ny fiainana ao amin'ny ankehitriny sy ny hoavy (fahaverezan'ny fahasambarana).
Izany dia mazava fa ny vola onitra eo ambanin'ny toe-javatra toy izany dia tapa-kevitra ny tsy rariny.
Functional fomba dia midika tanteraka velively izany mba hampiorina ny 'sanda' ny fahasambarana, ka noho izany, izany dia heverina fa ny fitsarana dia tsy maintsy loka ny mpitory ny vola izay mety ho ampy hanome fahafaham-po azy. Mazava ho azy, ny fomba etsy ambony moa ve tsy setroka ny zava-nitranga ny Britanika ny fitsarana sy ny ANTSIKA fitsarana, satria isaky ny karazana takelaka ara-dalàna ny fifandraisana manana toetra manokana.
Ny fepetra ilaina ho madio ara-tsaina ratsy ao amin'io rafitra ara-dalàna dia antsoina hoe 'anjara' ny niharam-boina ny hetsika, ny causer ny fahavoazana, izany hoe, ny fametrahana avy hatrany aria e. mety fifandraisana eo toy izany ny ratsy sy ny fihetsika tsy manara-dalàna ny voampanga Ampy fepetra hentitra dia ampiharina amin'ny alalan'ny fitsarana sy momba ny fitsipiky ny predictability ny fisehoan-javatra ara-tsaina ratsy, izay iray amin'ireo toe-javatra noho ny firongatry ny zo hahazo onitra.
Tsara homarihina fa ny milaza ho an'ny onitra ara-tsaina (moral) ratsy foana dia tsy ny foto-kevitra ara-dalàna ny fizotry ny tantara. Matetika ny olona izay nahatonga ny fahavoazana sy ny niharam-boina hamaha ity olana ity avy ao amin'ny fitsarana. Ho famintinana, aho mihevitra azy io ho ilaina ny mampiasa ny zavatra niainan'ny firenena vahiny, satria maro amin'ireo firenena mandroso (Angletera, Etazonia, Frantsa, Alemana, sns.) toe-javatra ny onitra noho ny fitondran-tena ratsy efa nandinika nandritra ny zato taona maro, ary satria ny fotoana izay haha ara-dalàna ny onitra noho ny fitondran-tena ratsy ao Ukraine dia tsy ela be raha oharina amin'ny firenena hafa. Ity no ilaina ho amin'ny fampandrosoana ny onitra fitondran-tena ratsy ao amin'ny firenena ary mandray anjara amin'ny fanatsarana ny fiarovana ny zo sy ny fahalalahana iantohan'ny ny Lalàmpanorenana ny Ukraine. Disclaimer: Raha ny ezaka rehetra natao mba ho azo antoka ny fahamarinan'ny boky ity izao, dia tsy natao izany mba hanome torohevitra araka ny lalàna ho toy ny toe-javatra tsirairay dia samy hafa, ary tokony ho niresaka tamin'ny manam-pahaizana manokana ary na ny mpisolo vava.
Fitaovam-piadiana ny fahazoan-dalana sy ny fahazoan-dalana